HALKAAN KA AKHRISO:WAA WARARKA WARGEYSKA M.TIMEA DAILY NEWSPAPER EE MAANTA OO AH TALAADO 8DA SEPTEMBAR 2020KA
Tuesday September 08, 2020 - 14:31:54 in Wararka by Mogadishu Times
AXMED MADOOBE IYO DENI OO XAFLAD SOO DHAWEYN LOO SAMEEYAY Madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Punt land, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Mado obe) iyo Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta xaflad soo dhaweyn ah loogu sameeyay Mag aalada Muqdisho. Madaxwe
AXMED MADOOBE IYO DENI OO XAFLAD SOO DHAWEYN LOO SAMEEYAY Madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Punt land, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Mado obe) iyo Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta xaflad soo dhaweyn ah loogu sameeyay Mag aalada Muqdisho. Madaxweyneyaashii hore ee Somaliya, Xa san Shiikh Maxamuud iyo Cali Mahdi Maxa med ayaa soo qabanqaabiyay xafladan, oo ay ka qaybgaleen xubno ka tirsan Labada Aqal ee Baarlamaanka, xubno kala duwan oo ka kala tirsan Goleyaasha Puntland & Jubbaland, Hog gaamiyeyaal Xisbi, Siyaasiyiin, Hoggaanka Dhaqan, Waxgarad, Ururo Bulsho iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Gobolka Banaadir. Madaxweynaha Puntland oo xafladda ka hadlay Madaxweyneyaashii hore ee dalka ka ga mahadceliyay soo dhaweynta qurux badan, ee ay maanta ugu sameeyen Caasimadda Muqdisho. Madaxweynaha Puntland ayaa markale ku celiyay in Puntland ka go'antahay in dalka ka dhacdo doorasho la'isla ogolyahay oo waqtig eeda ku dhacda. G/W. XILKA SIIHAAYA OO MEEL MARIYAY XUBNAHA LADAGALLANKA MUSUMAASUQA G/Wasiirrada Soomaaliya ee Siihayayaa sha ah ayaa meel mariyay Xunbaha guddiga madaxa bannaan ee ladag allanka Musumaa suqa. Waxaa ay Sha lay meel mariyeen G/Wasiirr ada Soo maaliya ee Siihay ayaa sha ah 9ka xubnood oo noqon doono GuddIga Madaxa Bannaan ee Ladagallanka Musumaasu qa ee W/Caddaaladdu u soo gu dbisay Golaha Was iirrada. Guddi ga madaxa banna an ee la dag aalan ka musuqmaas uqu waxay lafdhabar u yihiin howlaha baarista musuqmaa suqa. Macagyada Xubaha la anxisiyaya ayaa kala ah: 1: Maxamed Cabdikariim Ibraahim 2: Avv. Cabdiweli Axmed Cumar 3: Dr. Xasan Khaliif Xasan 4: Avv. Maxamed Xuseen Xaamud 5: Avv. Saciido Maxamed Xaashi 6: Amiin Axmed Sh. Cabdiraxmaan 7: Cabdullaahi Sh. Abuukar 8: Khadar Axmed Diiriye 9: Saamiya Siciid Xuseen. GUDDOOMIYE CUMAR FINISH: DHALINYARADA REER MUQDISHO WAXAA WAXBARASHADII KA MA SHQUULIYAY TIKTOK IYO TAABUUK Gudoomiyaha G/Banaadir Cumar Finish ay aa hadlay sababta ka dambeys ay in arday ba dan oo reer Muq disho ay ku dha caan imtixa an ka shahaadiga ah ee sanad dugs iyeedka 2019/2020. G/Ban aadir ayaa boqolaal arday oo wax ka baranaysay waxay ku dhaceen im tix aankii dugsiga sare oo nati ijad iisa la shaaciy ay ma alin ka hor, taasoo su'aalo ba dan ka dhalisay baraha bul shada. Guddoomiye Cumar Filish ayaa sheegay dhalinyarada gobolka Banaadir inay aad ugu mashquuleen isticmaalka Tiktok oo ah nuuc ka mid ah aala daha baraha bulsh ada iyo Taabu uk, oo ah Da roogo dhalinyaradu u badan tahay isticmaal keeda, taasoo caafim aad ahaan aad looga digay. "Qof kasta oo Taabuuk iyo Tiktok uga mash quulay tacliintiisii natiijadaas ayuu dhaxlayaa," ayuu yidhi guddoomiye Cumar Filish. Dhinaca kale, Dallada Waxbarashada Ahli ga ah ee SAFE ayaa nasiib darro weyn ku tilm aamtay in 7,873 arday oo wax ka baranayay dugsiyada G/Banaadir ay ku dhacaan imtixaan ka, taasoo ay sheegeen inay ugu wacan tahay, muddo 3bilood ka badan oo aysan ardayda G/Banaadir waxbarasho helin sababo la xiriira cudurka COVID19. Waxay maasuuliyadaas ku eedeeyeen sii ha yaha W/Waxbarashada & masuuliyiinta la sha qeysa, iyagoo ku baaqay in xilka laga qaado.
SANBALOOLSHE OO BEELAHA HAWIYE U DIRAY BA AQ LA XIRIIRA RA’IISUL WASAARAHA CUSUB
Taliyihii hore nabadsugidda qaranka Soo maaliya ayaa beel weynta Hiraab ugu baaqay iney ka tanaasulaan xilka R/wasaaraha Soom aaliya maadaama uu caraf beelay, sida uu ha dalka u dhigay.
Sanbalooshe ayaa ka hadla yey casuumad ay Beelaha Hawiye qa do ugu sameeye en 2da madaxweyne ee Jub baland iyo Puntland kuw aas oo ku sugan Muqdisho si xal looga ga aro xaaladda kala guurka wadanka iyo heshiis laga gaaro nuuca doorashada uu dalka gal ayo.
Sanbaloolshe oo goobta ka hadlay wuxuu yiri "R/wasaarahii waa caraf beelay ee hala iska dhaafo Hiraab ow” Sidoo kale wuxuu madaxw eyn ayaasha Jubbaland iyo Puntland u gu baa qay ineysan gogoshii Dhuusamareeb ilo obin, heshiiskana halagu gaaro Xamar balse waa iney wax walba ku soo xiraan caasimadda Galmudug.
Sanbaloolshe oo ka mid ah xubnaha ugu firfircoon mucaaradka uguna hadal helidda og, wuxuu dardaarmay in la xushmeeyo gogoshii uu dhigay Axmed Cabdi Kaariye (QoorQoor).
Hotel Dorbin ayey munaasabadda ka soco taa waxaana ku sugan madaxweynayaashii ho re Soomaaliya (Cali Mahdi Maxamed iyo Xas an Shiekh Maxamuud), sidoo kale golayaasha 2da aqal ee Federaalka iyo gudoomiyaha xisb iga Wadajir (Cabdiraxmaan Cabdishakuur War same) ayaa ku sugan.
SACIID DENI: XAALADDA XAMAR LAGUMA EEDEYN KARO FARMAAJO KALIYA
Madaxweynaha Puntland Saciid C/hi Deni oo Shalay hadal ka jeediyey xaflad qado sha raf ah oo siyaasiyiinta beelaha Haw iye ay u sa meeyeen madaxweyn ay aasha Jubbaland iyo Puntland ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah.
Ugu horeyn Deni ayaa sheegay in gogoshii shirkii Dhuusamareeb ay iyagu bilaabeen, ba lse aan la dhihi karin Saciid Deni iyo Axmed Madoobe mategin, isag oo eeda fashilkii ku yimid u tiiriyey madaxda federaalka. Deni ay aa ka mahad celinta martiqaad kaas ka dib waxa uu qiray in re er Muqdisho ay sam ir bad an mu ujiyeen, isagoo beelaha dega u soo jeed iyey talooyin dhowr ah.
"Xamar sida ay Shalay u egtahay si lagu ra ali ahaan karo maaha, amaan ma jiro, nadaaf ad ma jirto, meel kasta waa la dhistay, balse hadda dowladdu intii ay joogtay waa ka muuq daa deganaashaha iyo samirka aad sheegte en,” ayuu yiri madaxweynaha Puntland.
Isagoo sii hadlaayey ayuu yiri, "Xamar sida ay u ekaaneyso Shalay Farmaajo kaliya lagu ma eedeyn karo, waxaa la rabaa in Xamar wix ii ka qaldan laga saxo, sababtoo ah waa halkii laga bilaabayey dib u dhiska dalka oo dhan, waxna waa sharciga iyo maqaamkeeda, wax na waa muuqaalkeeda, dhamaanteen waan je celnahay Xamar ee aan hagaajisano.”
Sidoo kale waxa uu sheegay in dalku uu ha dda marayo xaalad adag, isla markaana loo ba ahanyahay in awooda la isugu geeyo sidii dal ka ay doorasho uga dhici laheyd.
"Hadhow yaan la cabaadin dowladda soo so cota waxay qaban laheyd waa in hadda la isla garto, oo sanadka ugu dambeeya aan la caba adin sababtoo ah waqtigu markii uu gabagabo noqdo ayaan dhahnaa seeisu dooraneynaa” ayuu yiri.
Ugu dambeyntii Saciid Deni ayaa ku baaqay in aad loo badiyo gogosha noocan ah, "Waaya haan dambe Soomaalida waxaa la yiri siyaas adda habeenkii ayey ka shaqeysaa hadda wax aan rabnaa siyaasadda maalinki inaan ka shaq eyno.Sababtoo ah horaa loo yiri xalaal dharaarbaa la qashaa, bahashaan mugdiga ah horta naga dhaafa” ayuu yiri Saciid C/hi Deni.
SOOMAALIYA IYO DALAL KALE OO AFRIKAAN OO SAFKA HORE KA GALAY MUSUQ MAASUQA DHAQAALAHA COVDI9
Kenya, Zimbabwe, Uganda, Somalia iyo Ni geria ayaa lagu tilmaamay inay safka hore ka ga jiraan kiisaska musuqmaasuq ee bililiqay si ga lacagaha Covid19 ee caalamka ugu dee qay. Waxaa laga cabsi qabaa in dalal badan oo kale ay soo ifbaxaan sida ay sheegayan ba aritaanka iyo macluumaad dheeri ah oo soo if baxaya.
Agaasimaha Guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ay aa la simay musuqmaasuqa qalabka badqeb ka shaqaalaha caafimaadka inuu lamid yah ay dil. "Heer kasta ama nooc kasta oo musuqm aasuq lama aqbali karo. Si kastaba ha noqo tee, musuqmaasuqa la xiriira qalabka badqeb ka shaqaalaha caafimaadka aniga ahaan runtii waa dil. Sababtoo ah, haddii shaqaalaha caafi maadku shaqeeyaan bilaa qalab, waxaan qa tar galineynaa noloshooda taasna waxay sidoo kale halis gelineysaa nolosha dadka ay u adee gaan.Marka waa dambi waana dil, ”Dr Ghebr eye sus ayaa yiri. Hay’adda caafimaadka addu unka waxay sheegtay kiisaska ilaa iyo hadda la ogaaday xa tooyadooda iyo leexsiga lacagta gargaarka ee loogu talagalay dadka nugul ay kor u dhaaftay balaayiin doollar.
BANGIGA AMAANA OO HESHIIS LA SAXIIXDAY SHIRKADDA PATH SOLUTIONS
Amaana Bank oo uu fadhigiisa yahay M/Mu qdisho ayaa heshiis la saxiixday shirkad laga leeyahay dalka Lubnaan oo ka shaqaysa howl aha horumarinta softaweerada ee ay ku shaqe eyaan qaar ka mid ah bangiyada caalamka.
Xaflad lagu qabtay M/Dub ai ayuu Bangiga Amaana ku la saxiixday heshiiskan shirk adda la yiraahdo Path Solut ions oo fadhigeeda yahay M/Beyruut.
Heshiiska ay kala saxiixdeen 2da dhinac ayaa ah mid lagu kobcinaayo adeegyada Bang iga uu u qabto macaamiishiisa. Adeegya da ay shirkadda ka caawin doonto Bangiga ay aa waxaa mid ah adeeg joogta oo aan kala go' lahayn 24ka saac maalintiiba.
Sharikadda Path Solutions waxay ka mid ta hay sharikadda ugu waaweyn adduunka ee si da gaar ka ah ugu caanbaxay iswaafajinta sha reecada iyo howlaha bangiyada.
2da dhinac heshiisyada waxaa u kala saxii xay Cabdirisaaq Xuseen Macalin oo ah gudd oomiyaha Amaana iyo Madaxa Path Solutions Maxamed Katiib.
SOOMAALIYA OO SHEEGTAY SANADKAN INAY SAMEEYEEN DAGAALKII UGU WEYNAA EE MUSUQ MAASUQA.
Xeerilaaliyaha guud ee Qaranka Dr; Sulay maan Maxamed Maxamuud, ayaa sheegay in Dowladdu ay Sanadkan xoojisay la dagaall anka musuqmaasuq, taas oo kor u qaadday sumacada Dalka.
Xeer ilaaliyaha oo ka hadlayay kulan uu la qaatay bahda caddaa ladda ayaa sheegay in hay’adaha caddaaladda iyo garsoorku ay yihiin kuwa la ra bo inay ku dedaalaan sinnaanta, si loo dabar gooyo musuqmaasuqa aafeeyay Soomaaliya.
Dr. Sulaymaan Maxamed ayaa tilmaamay inay san sax ahayn in Soomaaliya Sannad kasta ay kaalinta koobaad uga jirto waddamada ugu musuqa badan Adduunka, xeerilaaliyaha ayaa sidoo kale sheegay in Sanadkan ay sameeyeen bahda Caddaaladda la dagaalankii ugu xoo gga badnaa ee dhinaca Musaqa ah.
Dhowaan ayay ahayd markii ay Maxkamad da G/Banaadir xukunno kala duwan ku ridday qaar ka mid ah shaqaalaha iyo mas’uuliyiinta W/Dowladda, kuwaas oo lagu eedeeyay mus uq iyo ku takrifal awoodeed.
TAABIT CABDI "NATIIJADA IMTIXAANKA DUGSIGA SARE WAXAA KU JIRAY HUMAAG BADAN IYO WAXYAABO IS DIIDAN”
Guddoomiyihii hore ee G/Banaadir ahna Ho ggaamiyaha Xisbiga Awoodda Shacabka Ta abit Cabdi Maxamed ayaa war ka soo saaray natiijadii ka soo baxday W/Waxbarashada ee Imtixaanka fasalka 4aad ee Dugsiga Sare, isa goo caddeeyay in natiijadaas ay ku jirto huma ag iyo waxyaabo is diiddan.
Taabit Cabdi ayaa sheegay in arrin ugub ay tahay in 36% Ardayda Gobolka Banaadir, isa goo xusay inay u baahan tahay tafaasiil caqli leh sababta keentay hoos u dhaca sidaa u weyn sanad gudihiis.
Halkan hoose ka akhriso:
Natiijadii imtixaanka ee Dorraad ka soo baxd ay Wasaaradda Waxbarashada ee DFS waxaa ku jiray humaag badan iyo waxyaabo is diidan, waxaana walaaca iyo baahida loo qabo in arri ntaas la turxaanbixiyo la qabnaa ardeyda, waa lidiinta iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee si da togan uga hadlay arrinkan.
Anigoo dareensan culeyska shaqada ay Wa saaraddu heyso, haddana ma sahlana in si fud ud oo aan daliil maangal ah la socon lagu tuu ro mustaqbalka 8,550 arday, oo xilli adag wax ku soo bartay, xilli adagna sannadkan imtixaan u fariistay.
In guud ahaan 25% ardaydu ku guul dareyst aan imtixaan qaran ma’ahan mid lagu macn eyn karo daddaalyari arday iyo tayodarro dug si, balse waxey burbur iyo guul darro ku tahay nidaamka waxbarasho ee dalka.
Dhanka kale, waa arrin ugub ah in 36% ay dhaceen ardeydii Gobalka Benaadir sannad kan u gashay imtixaanka, waxeyna u baahan tahay tafaasiil caqli gal ah sababta keentay hoos u dhaca sidaa u weyn sanad guddahii.
W/Waxbarashada & Tacliinta Sare, waxaa loo ga fadhiyaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan bulshada ugu soo bandhigto caddeymo iyo tafaasiil si dhab ah loogu kuur galay (empirical evidence) oo bulshadu lagu qancin karo.
Ugu dambeyn, iyadoo la tixgalinayo dareenka ardeyda, waalidka iyo cid walba oo shaki bad an ka qaaday natiijadan, waxaan soo jeediney naa in arrinkan loo saaro guddi baara; sidii imti xaanka loo qaaday, sidii loo saxay, hadii aan goobbaha qaar la sixin iyo ammaanada imtixa anka, taas oo dawo u noqon doonta walaaca taagan, daahana ka rogi doonta cidda laheyd mas’uuliyadda guul daradda nidaamka waxba rasho ee dugsiyada dalka.
WASIIR GOODAX OO SHARAXAY SABABTA AY ARD AYDA MUQDISHO UGU BATEEN DHICITAANKA IMTI XAANKA
Maalin ka dib markii W/Waxbarashada ee DFS ay ku dhawaaqday natiijada imtixaanaad ka shahaadiga ee dugsiga sare, waxaa si we yn looga hadlay kumannaan arday oo wasaar adu ay sheegtay inay ku dhaceen imtixaankaa si gaar ahaan ardey badan oo ku sugan caa simadda Muqdisho.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya C/hi Goodax Barre oo la hadlay BBCda ayaa shee gay inay jiraan sababo u gaar ah arday imtix aanaadka ku dhacday ee G/ Banaadir.
"In imtixaanka ay ardayda ka dhacaan waa inay aysan ku guuleysanin. Sida loo saxo imtix aanka halkii maado ee qofkiiba waxaa saxa 3 qof, ka dibna waxaa uga sii dambeeya, qofka kale oo eegaya sidii wax loo saxay ka dibna ko rmeeraya, waxaana sidoo kale jira dad kale oo isku daraya dhibcaha ardayga uu helo iyo hub intooda, waxaana isleenahay sidii ugu quruxda badneyd ayaa loo saxay”, ayuu yiri C/hi Goo dax Barre.
Wasiir Goodax oo sii hadlaayey ayaa yiri, "Wax qarsoon ma ahan sida imtixaanka loo sa xo oo walibana sannadkan waxaan ku casuum nay kuwa ay iska soo xuleen, kuwaas oo marq aati ka ahaa sida loo saxato imtixaan ka.” G/G/Banaadir oo hadal ka jeediyey xaflad uu Jaamacad uga qalin jebinayey ayaa yiri, "Wa xaad ogtihiin imtixaankii Dorraad natiijadiisa la shaaciyey ee dugsiga sare lambarka arday ee ka dhacday.Waxaa lagu mashquulay Tiktok iyo Taabuu, marka qof kasta oo waxaas tacliintiisa uga mashquulay natiijadaas ayuu dhaxlayaa, qof kasta oo habeeno u soo jeeda dhisitaanka nafsadiisana mustaqbal ayuu dhisayaa, qofkii doonaya in uu meel gaarana runtii habeenuu dhafraa.”
DALLADA WAXBARASHADA SAFE OO BAAQ CULUS KA SOO SAARTAY NATIIJADA IMTIXAANKA DOWLADA
Dallada Waxbarashada Ahliga ah ee SAFE ayaa War Saxaafadeed ka soo saartay natiija da Natiijada Imtixaanaadka Qaranka ee Dorraad 06 Sebtember, 2020 lagu dhawaaqay laguna sheegay inay hartay ardey gaareysa 7,873 ar dey ee dugsiyada gobolka Banaadir ku tilmaa ntay inuu yahay mas’uuliyad daro weyn ay ku dhaqaaqeen sii haayaha Wasiirka Waxbarash ada iyo howlwadeenadiisa ee Agaasinka Was aaradda iyo Xafiiska imtixaanaadka.
War Saxaafadeedka ayaa la gu xusay in in muddo 3bilod ka badan aysan ardayda G/Banaadir waxbarasho hel in sababo la xiriira cudurka COVID19.
Ugu dambeyntii dallada waxbarashada SAF E ayaa ugu baaqday Madaxweynaha iyo Sii ha yaha R/Wasaaraha dalka In lagala xisaabtamo Howlwadeenada wasaaradda mus’uuliyad da rro wadareedka ay ku dhaqaaqeen ayna ku wa ayaan xilkooda iyo In mustaqbalka Dugsiyada iyo Ardeyda G/Banaadir aan gacanta loo gelin dad aan qaadi Karin mas’uuliyadaas.
Halkan hoose ka aqriso War Saxaafadeedka Dalada SAFE war saxaafadeed
SHABAAB OO XALAY QABSADAY DEGMADA BAL CAD IYO WARARKII UGU DAMBEEYEY XAALADDA
Wararka naga soo gaaraya degmada Bal cad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa she egaya in xalay degmadaasi ay weerar ku qaad een xubno ka tirsan xarakada AlShabaab.
Dad ku sugan Balcad ayaa xaqiijiyey in dagaal cu lus ay Shabaab degmada kusoo qaadeen, islamarkaana saacado kooban ay la wareeg een gacan ku heynta afar Xaafadood oo ka mid ah kuwa degmada.
Waxaa jira dad rayid ah oo waxyeelo ay ka soo gaartay dagaalka, oo ay ka mid aheyd haweenay dhaa wac culus uu gaaray. Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku dara yaan in AlShab aab ay saldhiga degmada Bal cad kasii day een maxaabiis gaaray tobanaan oo eedeymo kala duwan ugu xirnaa halkaas.
Warbaahinta AlShabaab ayaa sheegatay inay gacanta ku dhigeen xarunta maamulka de gmada Balcad, saldhigga Booliska, xabsiga dhexe iyo dhammaan koontaroollada lagasoo galo magaalada.
Ciidanka dowladda ayaa saaka dib ula ware egay magaalada ka dib markii ay ka baxeen AlShabaabkii xalay weerarka kusoo qaaday.
Degmada Balcad oo 30 Km dhanka waqo oyi ka xigta magaalada caasimadda ah ayaa bi lihii tegay bartilmeed u ahayd kooxda AlShaba ab oo ka fulisay weeraro kala duwan.
Maamulka degmada ayaa marar badan do wladda federaalka ka codsaday inay soo dirto ciidamo magaalada & Gobolkaba ka xoreya AlShabaab,balse cidna ma dhageysan Baaqoda
PUNTLAND OO XOG KA BIXISAY WADAHADALLADA MUQDISHO IYO MOWQIFKA GALMUDUG, HIRSHABELLE IYO K/GALBEED
W/W/Warfaafinta Puntland C/hi Cali Xirsi (TI MACAADE) oo waraysi gaar ah siiyay Radio Garowe ayaa fahfaahin ka bixiyay kulamada madaxda DFS & Madaxda Jubbland iyo Puntl and uga socda M/Muqdisho. Timacadde ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in dhamaan Madaxda Maamullada iyo DF ay isagu yimaadaan shirweyne looga wadahadli doono arrimaha misiiriga ah, oo doorashooyinka ay ka mid yihiin iyo xalinta khilaafaadka taagan.
Mar wax laga waydiiyay inay jiraan warar shee gaya in Madaxda HirShabeelle, Galmudug iyo K/ Galbeed ay ka biyo diidayaan inay kasoo qe ybgalaan shirka la qorsheynayo, ayuu wuxuu ku jawaabay in warkaasi uusan waxba ka war heynin, balse uu ogyahay inay soo dhaweey aan warmurtiyeedkii shirkii Deni iyo Axmed Madoobe ku yeesheen dhawaan M/Garowe.
Kulankii Farmaajo, Deni iyo Axmed Mado obe ay yeesheen Sabtidii ayaa Wasiirka wux uu ku tilmaamay inuu ahaa mid loogu gogolxa arayay Shirka loo dhan yahay, isagoo meesha ka saaray warar sheegaya in heshiis ay dhina cyada ku gaareen.
Wuxuu Wasiir Timacadde dhanka kale ka warbixiyay kulamo gaargaar ah oo Deni Muqd isho kula yeeshay Wakiiladda Beesha Caalam ka & Safiiradda ajnabiga, isagoo tilmaamay in ay ahaayeen kuwa ku saabsan dardargelinta wadahadallada arrimaha doorashooyinka.
Puntland iyo Jubbaland ayaa horey u qaad acay natiijadda Shirkii Dhuusamareeb 3, kaa soo laga saareey bishii lasoo dhaafay warmur tiyeed lagu sheegay in heshiis doorasho la gaarey. Safaaradda Mareykanka ayaa ka dib shirkii Dhuusamareeb soo saareysay qoraallo isdabajoog ah, oo baqdingelin iyo dhiiragelin isagu jiray, oo ugu dambeyn horseeday inuu Farmaajo ogolaado Shir loo dhan yahay inuu qabto.
QARAX ISMIIDAAMIN OO KA DHACAY GOBOLKA JUBBADA HOOSE
Wararka ka imaanaya G/Jubbada hoose ee K/ta Somaliya ayaa sheegaya in Shalay barqa dii halkaasi uu ka dhacay Qarax Ismiidaamin ah oo uu fuliyay ruux naftiis halige ah.
Qaraxan ayaa waxaa lala eegtay Kolonyo gaadiid ah oo isugu jira Ciidanka Danab & Ci idan Mareykan ah, kuwaasi oo maraayay dul eedka deegaanka Jannaa Cabdalle ee G/ Jub bada hoose. Gaari waxyaabaha Qarxa laga soo buuxiyay ayaa dhexda ka galay Kolonyada gaadiidkaan, kadibna isku qarxiyay, waxaana la sheegay Ismiidaaminta kadib inay xigtay d agaal toos ah.
Lama oga illaa hadda Khasaaraha dhimash ada & midka dhaawaca ah ee ka dhashay Qar axaan Ismiidaaminta ah ee lala eegtay Kolon yada gaadiidka ee Ciidamada Mareykan ka & Kuwa Danab ay wateen.
Deegaanka Janna Cabdalle ayaa waxaa ku sugan ciidamada Xoogga dalka oo Shabaab ka saaray deegaankaasi, inkastoo Shabaab weli ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan deegaankaasi. Jannaa Cabdalle ayaa wuxuu ku yaalla duleedka M/Kismaayo, qiyaastiina waxa ay Kismaayo u jirtaa 60 KM waa meel ist araatiiji ah oo Shabaab markii hore weerarada ay ka soo abaabuli jireen.
ALSHABAAB OO SHEEGATAY IN ASKAR MAREYK AN KU DISHAY WEERAR IS QARXIN AH KA DHACAY DULEEDKA KISMAAYO
Wararka ka imaanaya deegaanka Janaay Cabdalla ee G/Jubadda Hoose ayaa sheegaya in AlShabaab ka fulisay qarax ismiidaamin ah oo ay la beegsatay Saldhig Ciidamada Danab iyo kuwa Jubbaland ku leeyihiin deegaankaas.
Sida wararku sheegayaan gaariga waxyaa baha qarca laga soo buuxiyay ayaa xoog ku soo jiiray bar ko ontaroolo ciidanka lahaayeen, waxaana uu ku qarxay afaafka hore ee xerada. Wararka ayaa sheegaya in As kar Mareykan ah oo la socday Ciidanka Danab waxyeelo ka soo gaartay, waxaana war ka soo baxay AlShabaab lagu sheegay inay ku dileen Askari Mareykan ah.
Gaariga qaraxa fuliyay ayaa la sheegay in uu ahaa kuwa aan xabada karin oo AlShaba ab ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa, iya doo intii la rasaaseeynayay uu soo jiiray Ciid amada illaa afaafka hore ee Xerada uu isku qarxiyay.
MAREYKANKA OO QIRTAY IN WAXYEELO KA SOO GAARTAY WEERARKII JANNAA CABDALLE
Taliska Ciidamada Mareykanka ee Qaarad da Afrika (AFRICOM) ayaa ka hadlay weerarkii ismiidaaminta ahaa, ee Shalay ka dhacay dee gaanka Jannaa Cabdalle ee Gobolka Jubbada Hoose.
Nin la socday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa Ciidamada Danab iyo kuwa Mar eykanka ku weeraray duleed ka Jannaa Cabd alle.
Ururka Al Shabaab oo she egtay masuuliy adda weerarka asi ayaa sheegay inay ku dileen 20 askari, ku waa oo afar ka mida ay sheegeen inay u dha sheen dalka Mareykanka.
Afhayeen u hadlay Taliska AFRICOM, Kor neyl Chris Karns ayaa sheegay in hal askari ka ga dhaawacmay weerarkaasi, isagoo intaa ku daray inay degantahay xaaladda askarigaasi.
Afhayeenka oo la hadlay VOA ayaa sidoo kale sheegay in la dilay mid ka mid ah dagaalya hanada Ururka Al Shabaab.
General Aadan Maxamuud Ibraahim (Aa dan Koojaar), Taliyaha Guud ee Ciidamada Ju bbaland oo isna la hadlay BBC ayaa sheeg ay in la fashiliyay weerarkaasi, gaarigana uu qar xay ka hor intii aanu soo gaarin halkii ay ku su gnaayeen Ciidamada Huwanta.
Taliyaha ayaa intaa ku daray in firir ka dha shay qaraxaasi ay ku dhaawacmeen saddex ka mida ciidamadooda, isagoona meesha ka saaray in khasaaro intaasi ka baxsan uu jiro.
Weerarkan waxaa uu ku soo aadaya, xilli maa lin ka hor maleeshiyada Al Shabaab laga saar ay Jannaa Cabdalle oo muhiim u ahayd.
PUNTLAND OO QAATI KA TAAGAN QAMRIGA OO SI DII SHARAABKA USOO GALA DEGAANADEEDA
Puntland ayaa qaati ka taagan Maan doo ri yaha Qamriga, oo si xowli ah ugusoo badana ya degaanadeeda arrintaas oo loo sababeyna yo Qaadka ka yimaada dalka Ethiopia oo qamr iga lagusoo dhex qariyo. Taliyaha ciidanka bo oliiska gobolka Nugaal gaashaanle sare, Maxa med Aadan Jaamac, ayaa sheegay mudadii Qaadka Hareeriga uu kasoo bilowday dhinaca Ethiopia islamarkaana uu istaagay Qaadka Mii roowga ee Kenya ka Imaan jiray,inay fududaa tay in Qamriga si fudud kusoo galo Puntland.
Taliyaha booliisku wuxuu sheegay cidda soo galisa qamriga inay yihiin Qaad walayaasha oo gaadiidkooda kusoo qariya maadaama aan la gu samaynin wax baaritaan ah, laakiin hadda wuxuu uga digay in tallaabo laga qaadayo.
Saameynta Qamriga ayaa keentay inay kor dhaan dhibaatada ay geysanayaan dadka ca ba, waxaana Garowe oo caasimadda Puntland ah ka dhacay dilal iyo rabshado kale oo ay geysteen dad isticaamalayay qamriga.
DAAHIR RAYAALE OO SHAACA KA QAADAY MAS’ UULKII BIXIYEY AMARKII RABSHADAHA ABUURAY
Madaxweynihii hore ee Somaliland, Daahir Riyaale Kaahin ayaa markii u horeysay ka ha dlay xiisado muddooyinkii dambe ka taagna de egaanada Somaliland, gaar ahaan G/Aw dal. Daahir Rayaale ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in G/Awdal laga celiyo Uga aska Samaroon, kaasi oo dhawaan rabshado ka dhasheen amar loogu diidayo inuu gudaha u soo galo warkii.com gobolka ee Boorama.
Wuxuuna amarka lagu hor istaagay Ugaas ka ku sheegay mid aan laga fiirsan, isla marka ana kasoo baxay madaxweyne Muuse Biixi, oo isagu ku fashilmay inuu heshiis la gaaro oday aasha dhaqanka.
Daahir Rayaale oo u waramayey Telefish anka SAHAN, ayaa ku tilmaamay tallaabada Ugaaska lagu hor istaagay mid gef ah oo uu mas’uuliyaddeeda uu leeyahay madaxweyne Biixi. "Waxaan qabaa Ugaas u imanayey dad kiisii in ciidan laga horgeeyo, weliba xabad la gu rido, arrin gef ah ayaan u arkaa, taasna Ma daxweynaha ayaan si gaar ah u leeyahay gef keeda adigaa leh” ayuu yiri M/yne Rayaale.
Wuxuuna intaas kusii daray "Cid kasta oo ku la talisay (madaxweynaha) waxaan ku leeyah ay tallo khaldan ayey kugula talisay”.
Dhawaan uun bey aheyd markii amar kasoo baxay xukuumada Muuse Biixi lagu hor istaag ay Ugaaska Beelaha Samaroon, Ugaas Cabdir ashiid Ugaas Rooble oo rabay inuu gudaha u galo G/ Awdal. Go’aankaasi ayaa gebi ahaan ba ka hor imanayey inuu M/Boorama usoo gu dbo ugaaskaasi, xili uu kasoo tallaabayay xad ka dhulka ah ee ay wadaagaan Somaliland iyo Itoobiya.
Ciidamo badan oo fulinaya amarkaasi ayaa xiligaas rasaas ku kala dareeriyey dad badan oo rabay inay soo dhaweeyan ugaaska, xili ay weli taagan tahay xiisad ka dhalatay qabsoom ida doorashooyinka.
Waxaana Gudaha gobolka, gaar ahaan Boo rama ka istaadhmay rabshado hor leh oo ka dhan ah go’aankaasi, iyada oo gebi ahaanba ay xiligaas muddo wada xirnaayeen wadooyin muhiim ah. Gobolka Awdal ayaa hore u qaada cay in doorash o aan dib u eegis lagu sameyn saamiqeybsigeeda ay galaan, midaasi oo la rumeysan yahay inay arrintaasi ku lug leeda hay imaanshihiisa. Xukuumada M/Biixi oo xas aasiyad ga ar ah ka qabta in dhaqdhaqaaq cu sub uu ka istaadhmo gudaha gobolkaas, ayaa horseed u ah inay gebi ahaanba Somaliland ka mamnuucdo Ugaas C/shiid, sida ay ogaatay
LAFTAGAREEN, WAARE IYO QOORQOOR OO SHIR KU LEH MAGAALADA BAYDHABO
Madaxda D/Goboleedyada K/Galbeed, Hir shabelle iyo Galmudug ayaa waxaa lagu wa daa in shir uu uga furmo M/Baydhabo ee G/ Baay. Madaxweyn aha K/Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagare en) ayaa Madaxda Galmud ug iyo Hirshabelle, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) iyo Maxamed Cabdi Waare ku soo casuumay shir ay ku yeeshaan Magaalada Baydhabo.
Ilo wareedyo ayaa Dhacdo.com u sheegay in ujeedada shirka ay tahay in looga hadlo, si dii loo dardargelin lahaa shan iyo tobankii qod ob ee laga soo saaray Shirkii Dhuusamareeb 3 iyo waxa ay ka yeelayaan baaqa kaga yimid Madaxda Puntland iyo Jubbaland, ee la xiriiray in Madaxda kale ee Dowlad Goboleedyada la ga soo qaybgeliyo shirka ay Madaxweyne Ma xamed C/hi Farmaajo kula leeyihiin M/Muqdi sho.
Sarkaal ka tirsan Madaxtooyada Galmudug ayaa Dhacdo.com u sheegay in Madaxweyne Qoorqoor uu u safri doono Magaalada Baydh abo. Sidoo kale Dhacdo.com ayaa ogaatay in Madaxweyne Waare uu isna u ambabixi doo no Xarunta G/Baay ee M/Baydhabo, si uu uga qaybgalo shirkaasi.
Ma cadda in Madaxweynaha K/Galbeed uu shirka ku soo casuumay G/G/Banaadir ahna Duqa M/Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxam ed (Cumar Finish) iyo in kale, bacdamaa uu ka mid ahaa saxiixeyaasha Warmurtiyeedkii 20kii August laga soo saaray Shirkii Dhuusamar eeb 3.
D adka qaarkii ayaa su’aal gelinaya waxa ke enay in xilligan shirka mugdiga badani haree yay ee Muqdisho laga barbar furo shirka kale, ee Madaxda D/Goboleedyada ku yeelanayan Magaalada Baydhabo.
Arrimahan waxay ku soo aadayan, xilli waqt iga DFS uu gabaabsi ku dhowyahay, doorasha dana aad mooddo in laga gaabiyay dardargel inteeda, si xillig ii loogu talagalay ay dalka uga qabsoomto.
WAA KUWEE 4/TA DAL EE AFRIKA EE UU SHIIN UHU DOONAYO INUU SALDHIG MILATARI KA SAME YSTO?
Shiinaha ayaa ka fekeraya in saldhig mil atari uu ka sameysto afar dal oo Afrika ku yaa lla, sida laga soo xigtay Waaxda Difaaca Mar eykanka. Kenya, Seychelles, Tanzania iyo Ang ola iyo ku wo kale ayaa la sheegay inuu Shiinuhu doonayo inuu xarun milatari ka sameysto.
40 dal ayaan weli ka hadlin arrintaas.
Warbixinta oo ay waaxdu soo saartay 7adkii hore ayaa aad la iskula dhex marayay.
"Marka laga soo tago saldhigga uu hadda ku leeyahay Jabuuti, Shiinaha wuxuu aad ugu muuqdaa mid ka fekeraya inuu xarumo kale oo milatari sameysto si ay u taageeraan ciidama da cirka, badda iyo dhulka,” ayaa lagu yiri warb ixinta.Waxaa sidoo kale warbixinta lagu sheeg ay in Shiinaha uu ka fekeray inuu saldhigyo mi la tari ka sameysto dalalka Myanmar, Thaila nd, Singapore, Indone sia, Pakistan, Sri Lanka, Imaaraatka Carabta, Kenya, Seychelles, Tanz ania, Angola, iyo Taji kistan.
BOQOR SALMAAN "WAXAAN DOONAYNAA XAL CADDAALAD AH OO LOO HELO QADIYADDA FALASTIIN”
Boqorka Sacuudicarebiya Salmaan bin Ca bdilcasiis ayaa madaxwaynaha Maraykan ka Donald Trump u sheegay in wadamada Khalii jka ay doonayaan xal caadil ah oo kama danb ays ah oo laga gaaro qadi yadda Falastiin,taasi oo ka soo bilaabanaysa iyadoo la tixraac ayo hindisihii carabta ee 2002 dii.
2dan mas’uul ayaa ku wa da hadlay qadka tal eefanka, kadib qorshihii Maraykanka uu garh ayeenka ka ahaa ee Imaaraad ka Carabtu ku noqotay dalkii 3a ad ee carbeed ee caadiyeeya xiriirla Israa’iil.
Boqor Salmaan wuxuu ku yiri Trump "Sacu udicarabiya waxay doonaysaa xal joogta ah oo caadil ah oo laga gaaro ainta falastiin, wax aana loo baahan yahay imn Maraykanku taage ero.
Hindisahii nabadda ee 2002 ayaa caadiya ynta xiriirka Israa’iil ku xirayay shuruudaha ka la ah, in la helo dal madaxbannaan oo Falas tii niyiintu leeyihiin iyo in Israa’iil baxdo dhulkii ca rbeed oo ay ku qabsatay dagaalkii 1967.
Sacuudi Arabiya waa Ubucda Islaamka, waxaana ku yaalla goobaha ugu xurmada bad an Muslimiinta, walina ma aqoonsan jiritaanka dalnimo ee israa’iil.
NOOR BIN LADIN: WEERARKII SEPTEMBER 11 OO KALE AYAA KUSOO SOCDA MAREYKANKA WAXAA NA JOOJIN KARA KALIYA…
Noor Yeslam Bin Ladin oo ah gabar uu ad eer u ahaa hoggaamiyihii AlQacida Sheekh Osama Bin Laden ayaa wareysi ay siisay warg eyska The New York Post waxay taageero xoo ggan ugu muujisay madaxweyne Don ald Tru mp. Noor, ayaa sheegtay in Mareykanka uu wajahayo weerar la mid ah kii September 11, islamarkaana Tru mp uu ka hortagi do ono ha ddii dib loo doorto.
"Kooxda Daacish wa xay kobacday int ii ay xukunka hayeen Ob ama iyo Biden, taasi oo ho ggaami say in ay Yurub yima ada an.
Trump wuxuu muuj iyey I nuu Mareyk a nka iyo anna ga [Yurub] naga badbaad in karo hesli sta dib edda, isaga oo ciribtiraya ar gagixisada ka hor inta aysan helin fursad ay weerar ku gaystaan ayey tiri Noor.
Noor oo ku nool Switzerland ayaa u sheegt ay New York Post inay muddo taageero u ah ayd Trump, oo mid ka mid ah ballanqaadyad iiisa ugu weyn ee doorashada 2016 ay ahayd inuu muslimiinta ka mamnuuco inay soo gal aan Mareykanka. "Waxaan Trump taageero u ahaa tan iyo markii uu ku dhowaaqay inuu mu sharax yahay 2015. Meel fog ayaan ka daaw adaa waxaana jeclahay go’aanadiisa. Waa in dib loo doortaa, taas waxay muhiim u tahay mustaqbalka Mar ey kanka iyo dunida ilbaxday ee reer galbeed ka,” ayey tiri.
"U fiirso dhammaan weeraradii argagixiso ee ka dhacay Yurub 19 sano ee tegay, aad ay ey noo ruxeen. Islaamka xagjirka ah aad ayuu u dhex galay bulshadeena,” ayey Noor ku dar tay hadalkeeda. "Waa murugo in bidixda [Dimo qraadiga Mareykanka] ay la saftaan dad nooc aas ah.”
Noor ayaa badanaa twitterka soo dhigta saw irro muujinaya ayada oo xiran dhar ay ku qor an yihiin erayo ay ku taageereyso Trump.
Waxay sidoo kale faafisaa warar been ah oola gu weeraro dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter, ayada oo soo qaadata qaar ka mid ah mu uqaallada Fox News iyo suxufiga ka sha qeeya ee Tucker Carlson oo xulufo la ah Trump.
Noor Bin Ladin ayaa waxaa iska dhalay wal aal ka ka weyn Osama Bin Laden ee Yeslam Bin Laden iyo haweeney qoraa ah oo u dhala tay dalka Switzerland oo lagu magacaabo Ca rmen Dufour, taasi oo 2004 qortay buug aad u ga dmay oo ay kaga hadashay waqtigii ay la qaad aty qoyska Bin Laden.
Yeslam iyo Carmen ayaa kala tegay 1988kii , waxaana Noor ay sheegtaa inaysan waxba ka gelin qoyska aabaheed ee reer Sacuudi.
Noor waxay wargeyska New York Post u she egtay inay ka qaadatay shahaadada Maamul ka Ganacsiga Jaamacadda University of Gene va iyo Shahaadada Sharciga Ganacsiga eeJaamacadda University of London.
Wareysigeeda ayey ku sheegtay in ku kor itaankeeda Galbeedka uu macnaheedu yahay inay aad ula dhacsan tahay qayimka reer galb eedka.
WUXUU IS LAHAA DUQSI ISKA CAYRI BALSE GURIGA AYUU ISKA GUBAY.
Nin ku nool Faransiiska ayaa gubay qeyb ka mid ah gurigiisa, xilli uu isku dayayay inuu ti xsi iska cayriyo. Ninkan oo ku jira da`da 80me eya da, ay aa doo nay ay inuu cashe eyo , ka dib wux uu dhibsaday duq siga oo agtiisa ku wareegayay.
Wuxuu ka dib soo qaatay qalab koronto ah oo loogu talo galay in lagu dilo cayayaanka wu xu una bilaabay inuu ku cayriyo – balse haan ta ga aska ee gurigiisa taallay ayaa furneyd oo hawo sii deyneysay.
Falgal ay sameeyeen qalabkaas iyo gaas ka ayaa sababay qarax, kaas oo burburiyay jik a da, isla markaana waxyeello gaarsiiyay qeyb ka mid ah saqafka kore ee gurigiisa oo ku ya alla xaafadda ParcoulChenaud.
Sida ay ku warrameen warbaahinta gudaha, ninkan oo aan magaciisa la dhaacin ayaa si dir qi ah uga baxsaday dabka, keliya gacanta ay uu wax yar ka gubtay. Si kastaba, lama oga wi xi uu duqsigu ku damb eeyay. Ninkan ayaa ka dib raadsaday hoy kale iyadoo qoyskiisu ay dayactirayeen guriga. igasho:BBCSomali
AMISOM OO QIRTAY IN SHACAB AY KU DILEEN MUQDISHO
Ciidamada Midowga Afrika ee hawlgalka u jooga Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saar een ku qirtay iney dad shacab ah ku dileen M/ Muqdisho xilli ay faahfaahin ka bixiyeen qarax lagula eegtay dagmada Hiliwaa.
Bayaanka kasoo baxay AMIS OM ee lagu sharaxayay qarax kolonyo ciidamadooda ah la gula eegtay xaafadda suuqa xoolaha, halkaas oo uu ku burburay gaari nuu ca xamuulka oo ay lahaayeen ayey ku xaqiij iyeen inuu ku dhintay hal qof oo shacab ah.
"September 6th, 2020, mid ka mid ah ga waar idii ka midka ahaa kolonyo ka tirsan Hawlgalka Midowga Africa ee Soomaaliya (Amisom), kuw aas oo kasoo baxay saldhigga Maslax kuna soo jeeday Muqdisho, waxaa Qarax lagula ee gtay isgoyska ExControl Balcad. Baaritaanka hordhaca ah ayaa sheegaya in gaari xamuul ah uu burburay, waxaana ku dhintay hal qof oo shacab ah oo ka agdhawaa goobta” ayaa lagu yiri Bayaanka.
Ilo madax banaan ayaa sheegay in ugu yar aan 10 qofood ay ku dhinteen qaraxaas halka AMISOM ay kaliya qirteen hal qof, waxeyna tacsi u direen ehelada dadkii ku dhibaatoobay.
AMISOM waxey qoraalkooda ku sheegeen iney sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan kooxda AlShabaab ee xiriirka la leh AlQaa cida, waxeyna wadayaan baaritaanka qaraxii lagula eegtay halkaas.
2 QARAX OO KA DHACAY GOBOLKA MUDUG
Waxay faah faahin ka soo baxeysaa laba qa rax oo is xig xigay oo Shalay Ciidamada DFS lagula eegtay inta u dhaxeyso deegaanada Bacaadweyn iyo Caad ee Gobolka Mudug.
Ciidanka Kumaandooska Danab ee Qaybta 21aad ayaa qaraxyadan lagula eegtay deegaa nadaasi, xilli ay ka wadeen hawlgal ka dhan ah mintidiinta Al Shabaab.
Kumaandooska Danab ayaa maalmahaan ba hawlgalo ka waday halkaasi, ka dib dagaal kii qaraaraa ee Jimcihii tuulada Shabellow ee hoostagta deegaanka Bacaadweyn ku dhex maray dadka deegaanka iyo maleeshiyada Al Shabaab.Qaraxyada oo ahaa miinooyinka no oca dhulka lagu aaso ee meelaha fog fog laga hago ayaa mid ka mida waxaa lala beegsaday 2 gaari oo ay la socdeen Ciidanka Danab. Qar axaasi ayuu burbur ka soo gaaray hal ga ari.
Saraakiil ka tirsan Kumaandooska Danab ayaa Laanta afka Somaliga ee VOA u sheeg ay in lix askari kaga dhaawacantay qaraxyada asi, mana sheegin inay dhimasho jirto.
Ciidanka Danab ayaa waxaan jirin wax iska horimaad ah oo ay kala kulmeen mintidiinta Al Shabaab, intii ay dhaqdhaqaaqyada ka wad een tuulooyinka hoostagga Bacaadweyne iyo Caad.
Ciidanka Danab ayaa waxay weli halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ay ku qiimeynayan xaaladda deegaanka, si looga hortaggo weerar kale oo Shabaabku ku qaadaan tuulada Shabe llow. Hawlgaladan waxay ku soo imanayaan, xi lli Maamulka Bacaadweyn uu Galmudug iyo Taliska Qaybta 21aad ku dhaliilay inaanay ka helin taageeradii ay uga baahnaayeen, marka aad eegto weerarada soo noq noqday ee Sha baabku ka gaysanayan Shabellow.
W/BATROOLKA & MACDANTA XFS OO QABATAY SHIR KU SAABSAN SHARC IYADA HORT ABINTA U LEH DALKA.
Shirkan wada tashiga ay soo qaban qaabis ay wasaaradda Batrolka iyo Macdanta Sooma aliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, kaasi oo dhexmaray wasaaradaha heer Fed eraal iyo heer D/G &G/Banaadir.
Ajandayaasha shirkaasi lagu gorfeeyey wax aa kamid ah in si buxda looga wada shaqeeyo arrimaha hortabinta u leh W/Batroolka & Macd anta,ayna kamid yihiindhameystirka sharciga Macdanta iyo xeer nidaam iyeyaasha dareera ha hoose iyo kan hay’adda Batroolka oo muh iimada weyn u leh dalka.
Wasiir kuxigeenka W/Batro olka iyo Macdanta XFS Md. Maxamuud C/dir Hilaal ayaa Saxaa fadda uga waramay muhiim adda shirciyadaasi ay dalka u leeyihiin.
"Waxaan shir wada jir ah oo muhiim ah la yeel anay qaar ka mid ah W/,Ag aasimayaasha W/ Batroolka iyo Macdanta dowladaha xubnaha ka ah DFS, Gobolka Ban aadir, Maareeyaha & maareeye xigeen ka Hay’ addaBatroolka Soo maaliyeed,
Shirka oo intiisa badan aan diirada ku saar nay is xog waraysi wixii u qabsoomay, waxa aan qabsoomin, caqabadaha iyo qorsha yaa sha kala duwan ee u degsan dhinyada kulmay ayaa gaba gabadii hoosta laga wada xariiqay in si buuxda loo wada shaqeeyo iyo dhamays tirka hawlaha horutabinta u leh Wasaaradda”. Ayuu yiri wasiir Hilaal.
Sharciyadan oo ay waddo wasaaradda Bat roolka iyo Macdanta Soomaaliya ayaa kamid ah shuruuc badan oo muhiim u ah dalka, kuw aasi oo horyaala hay’adda fulinta & BFS.
HESHIIS HORDHAC AH OO LAGA GAARAY DAGAAL KHASAARO GEYSTAY
Odayaal dhaqan oo joojinta colaadda uga soo baxay magaalooyinka Ca daado iyo Dhu usamareeb ay aa ku guulaystay inay he shiis hor u dhac ah dhex dhi gaan maleeshiyo Dorr aad ku dagaalantay deegaanka Xan anbuure ee woqooyiga G/Gal gaduud. Qodobada heshiiska oo ah mid bilow ah ayaa wax aa ka mid ah: 1in xabad joojin shuruud la’aan ah laga sa meeyo deega anada Xa nanbuure iyo Qala anqalle
2 In Maleeshiyaadka labada beelood oo la ka la qaado, kuna laabtaan barahii ay ka yim aa deen.
4In Ciidamadda Xoogga dalka ay sugaan am nigga deegaanadii lagu dagaalamay.
5 In la furo wadooyinka, lana soo celiyo xasil oonidda deegaanka.
6 In la qabto kulan dib u heshiisiineed oo bala aran, kaas oo lagu dhammaystirayo hawlaha harsan.
Ciidamada qaybta 21aad ee xoogga dal ka, Booliska Federaalka ee gobolkaas ka hawl ga la iyo ciidanka nabad sugidda ayaa deega ana da lagu dagaalamay gaaray, waxaana ay ku guulaysteen inay colaadda joojiyaan, taas oo waxgaradka u suura galisay inay tallaabo u qaadaan dhinaca dib u heshiisiinta.
WARIYAAL U DHASHAY AUSTRALIA OO LAGA MUSA AFURIYAY WADANKA SHIINAHA.
Labo wariye oo u dhashay wadanka Aust ra lia ayaa laga musaafuriyay wadanka Shiinaha ka dib eedeemo loosoo jeediyay.
Wariyaasha ayaa maalintii shal ay ahayd la ga soo dajiyay maga alada Sydney ee dalka Australia.
Masuuliyiinta Shiinaha ayaa wariyaasha su’ aalo waydiiyay kahor inta aysan musaafurin.
Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Australia ayaa sheegtay in taageero xoogan ay u muuji yeen wariyaashan laga soo musaafuriyay wad anka Shiinaha.
Xiriirka u dhaxeeyo Shiinaha iyo Australia ay aana sii xumaanayay sanadihii ugu danbeyay.
WASIIRKA WAXBARASHADA OO KA HADLAY SABABAHA KEENAY DHICISTA ARDAYDA GOBOLKA BANAADIR
Wasiirka Waxbarashada Dowlada federalka C/hi Goodax Barre ayaa ka hadlay sababaha keenay in kumanaan arday ah oo wax ka barta G/Banaadir inay ku dhacaan imtixaanka kama dambaysta ah ee dugsiyada sare.
Cabdulaahi Goodax Barre oo wareysi siiyay idaacada bbcda laanta afka soomaaliga ayaa sheegay in ay jiraan sababo u gaar ah ardayda caasimada, taas oo keentay in imtixaanka ay arday badan ku dhacaan.
Wasiirka ayaa sababaha keentay inay nati ijo aan wanaagsanayn ardayda Muqdisho ay keenaan ay ka mid tahay in iskoolada gaarka loo leeyahay ay ardayda boobsiiyaan, taas oo keentay in wax ka qaldamaan tayada waxbara sho ee ardayda.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in aysan ardayda Muqdisho haysan macalimiin wanaag san sidoo kalana uu saameyn ku yeeshay cud urka Coronavirus oo muddo saddex bilood ah ardaydu wax baran.
Si kasta ha ahaatee SiihayahaWasiirka Wa xbarashada Goodax ayaa difaacay eedeymo loo soojeediyay wasaarada sida ay imtixaanka u saxday waxana uu sheegay in qorshe balla aran ay u sameeyeen sixitaanka imtixaanka.
Eedeymo badan ayaa loo soo jeediyay Wasa arada waxbarashada natiijada imtixaanka sa nad dugsiyeedkan iyadoo inkabadan toddobo kun oo arday ah ay imtixaankaku dhaceen.
MADAXWEYNE LAFTAGAREEN OO MAGICAABAY GUDDOOMIYE KU XIGEEN
Madaxweynaha DGKGS/ Cabdicasiis Xas an Maxamed Laftagareen ayaa Magacaabay Gudoomiye ku xige enka Maal iyada G/Sh/Hoose ee DGKGS.Gudoomiye ku xigeenka Maaliyada G/Sh/ ho ose ayaa loo magaca bay Yaas iin Maaxmed Bashiir.
Hoos ka Aqriso Warqadda Magacaabista